Stamp Mockup | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 15/05/2022 23:13 | Khayraadka
Haddii aad tahay naqshadeeye garaaf, waxa ugu badbaado badan ayaa ah in kombayutarkaada aad haysato gal gaar ah oo agabka ah, taas oo ah, xarfaha, sawirada iyo waliba majaajilada si aad u tusto macmiilka natiijo macquul ah. Intan gudaheeda, ma ku haysaa dhawr tusaale? Ma laga yaabaa buug jeesjees ah, banner majaajillo ah, majaajilo boodh ah… iyo shaambad jeesjees ah?
Waa run in kuwani aanay ahayn kuwa ugu badan ee la isticmaalo, laakiin yaa og, macmiilku wuu kuu iman karaa isagoo ku weydiinaya naqshadaynta shaambada. Maxaad samayn lahayd markaa si aad u tusto tusaalayaasha naqshadahaaga sawirada dhabta ah? Haddii aad rabto inaad ku ballaadhiso galka kheyraadkaada kuwan, halkan waxaan ku siin doonaa tusaalooyin.
1 Waa maxay maaweelka shaambada?
2 Tusaalooyinka Mockup Stamp
2.2 Maadays Shaabadaysan
2.3 Taariikhda Stamp Mockup
2.4 calaamadda shaabadda
2.5 Majaajilo loogu talagalay shaambada casriga ah
2.6 shaambada warqadda
2.7 Shaabad kale oo casri ah
Waa maxay maaweelka shaambada?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato maaweelada shaambada ayaa ah sida ay faa'iido u yeelan karto. Haddi aanad naftaada u hurayn summaynta shirkadaha, uma badna in shaqo noocan ahi ay kuu soo baxdo., sidaas darteed, iyadoon loo eegayn inta kheyraad ee aad haysato, waxay u badan tahay inaadan u baahnayn.
Waxaa jira shirkado, hay'ado iyo xitaa shakhsiyaad isticmaala tigidhada si ay u saxeexaan ama u qoraan in warqaddii ay ku jirtay ay soo martay shirkaddaas ama ay heshay. Badankoodu waxay doortaan inay iibsadaan mid, laakiin waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u badan in la doonayo in wax walba la habeeyo. Waana meesha shaqadaadu ka soo geli lahayd.
Si laga bilaabo, Waxaan ka hadleynaa halabuurka kaas oo naqshadeyntaadu ay ku dhex jirto sawir dhab ah. Tusaale ahaan, qiyaas in si aad u muujiso naqshadaada aad go'aansatid inaad aado dukaanka si loogu sameeyo shaambada. Markaad u tagto si aad u aragto macmiilka, waxaad jidh ahaan u tustaa sida naqshadayntaadu u ekaan doonto markaad dhejiso shaambada. Dhibaatadu waxay tahay in tani aysan hubin in macmiilku aqbalo waxaad samaysay oo uu ku siiyo lacag. Maxaa dhacaya haddii aadan jeclayn? Ka warran haddii uu doonayo dhowr taxan oo aad mar kale tusto isaga? Haddii ay tahay inaad maalgeliso shaambada mar kasta oo aad u tagto si aad u tusiso macmiilka, aakhirka waxba ma helaysid. Xitaa waxaad waayi kartaa lacag.
Taasi waa sababta maaweelo u muuqday si loo siiyo sawir dhab ah oo dheeraad ah nashqadaas Taas oo loo sameeyo si uu macmiilku fikrad u helo.
Majaajilada shaambada waxay noqon doontaa a shaambada meesha ay ku muujin doonto sida warqaddu u ekaan doonto meesha la dhigo (xaaladdan oo kale naqshadeyntaada). Oo ma jiraan isku-duubni taas? Haa, ka dibna waxaad haysataa dhowr.
Tusaalooyinka Mockup Stamp
Haddii aad rabto inaad balaadhiso ururintaada agabka, sababtoo ah waxaad u shaqeysaa shirkado ama waxaa lagaa codsaday naqshad noocan oo kale ah, Waxaan soo uruurinay qaar ka mid ah majaajilada bilaashka ah ee aan aragnay taasina waxay kaa caawin kartaa inaad muujiso sawirka ugu fiican ee shaqadaada. Tani waa doorashadayada.
Talada ugu horreysa dhab ahaantii waa bangiga sawirka, labadaba bilaash iyo lacag. Kani waa Freepik waxaanan kugula talineynaa sababtoo ah waxaad haysataa fursado badan oo aad ku heli karto stamps mockups.
Gaar ahaan, waa inaad kala saartaa sawirrada bilaashka ah iyo kuwa lacagta ah (kuwaasi waxay leeyihiin xiddig). Haddii aad mid ka mid ah jeceshahay, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa soo dejiso iyo markaad isticmaasho, haa, cWay ku habboon tahay inaad geliso qoraaga laakiin tani waxay noqon kartaa mid yar.
Halkan Waxaan kaa tagnay raadinta la sameeyay.
Marka ay ku weydiiyaan inaad sameyso shaambad, waxaad ogtahay in naqshaduhu uusan ku jiri doonin qaybta jireed ee la abuuray, laakiin saameynta, marka warqadda la calaamadiyo, way sii jiri doontaa. Haddaba, Aad muhiim uma aha in la muujiyo sida shaambadaadu noqon doonto ama silhouette ee erayada ama sawirada, sideese mar loo isticmaali doonaa.
Marka markan Waxaan kuu keenaynaa shaambad majaajillo ah halkaas oo aad ku heli doonto laba ikhtiyaar, mid fogaaday midna ka yar. Labadaba waxaa lagu habeyn karaa naqshadaada, maadaama ay ku jirto PSD oo leh lakabyo la beddeli karo.
Taariikhda Stamp Mockup
Bal qiyaas in shirkadda kaa codsatay shaabaddii ay u baahan tahay tan si ay u geliso waraaqaha imanaya. Si aanu xoghayuhu u saxeexin, shaabaddan ayaa la samayn lahaa taas oo taariikhda iyo magaca shirkadu soo baxaan. Waxaad xitaa gelin kartaa lambarka gelitaanka maalintaas.
Ka warran haddii ay ku weydiiyaan inaad taas samayso? Jees-jeeskan waxaad yeelan doontaa tusaale shaambadaas, laakiin waxaad horeyba u ogtahay in, naqshadeynta, waxyaabo lagu samayn karo siyaabo badan.
Dhanka kale, haddii aad rabto kan aan kuu sheegnay, waad heli kartaa Halkan.
Halkan waxaad ku haysataa tusaale kale oo ah majaajillo loogu talagalay shaambada kaliya, oo ka duwan kuwii hore, kiiskan ma arkaysid naqshadeynta shaambada, laakiin wuxuu diiradda saarayaa muujinta sida naqshadda calaamadeysan u eegi lahayd warqadda.
Sidan ayaad waxaad ku soo bandhigi doontaa natiijada naqshadayntaada shaambada, ma aha oo kaliya sawir aanad garanayn sida uu u ekaan doono shaambada.
waxaad soo dejisanaysaa kan Halkan.
Majaajilo loogu talagalay shaambada casriga ah
Xaaladdan oo kale waxaan rabnay inaan kaa tagno jeesjees leh stamps casri ah. Waxay la mid yihiin, haddaysan la mid ahayn, sidii kuwii hore, laakiin kuwan Waxay noqdaan kuwo wax ku ool ah sababtoo ah wax badan ma wasakheeyaan sida kuwa kale.
Xaaladdan oo kale, haddii aad eegto Nashqadaada waxaad ku yeelan doontaa warqad, laakiin shaambada lafteedu waxay leedahay naqshadda. Sidan, waxaad u sheegi lahayd macmiilka, xitaa haddii uu leeyahay, wuu kala saari karaa iyaga oo aan u baahnayn inuu eego ama isku dayo.
waxaad heshay tan Halkan.
Ka warran haddii naqshadda lagu waydiiyey ay tahay si loo shaabadeeyo waraaqaha ay diraan? Rumayso ama ha rumaysan, waxay wali qaadanaysaa dhuuqistaas iyo shaabadaynta in lagu calaamadiyo magaca shirkadda. La yaab maaha.
Waxaana laga yaabaa in macmiilkaagu rabo wax la mid ah, markaa waanu kaa tagnay jeesjees loogu talagalay stamps waraaqaha taas oo ka dhigi doonta naqshadeyntaada mid dhab ah.
Shaabad kale oo casri ah
Waxaan rabnay inaan ku siino tusaale kale oo shaabad casri ah si aad u aragto in ay yihiin stamps macnaheedu maaha in ay leeyihiin gees leydi, labajibbaaran ama gees wareegsan. Waxa kale oo la samayn karaa iyada oo aan lahayn.
Xaaladdan oo kale, waa mid fudud, laakiin haddii aad garato ku qas astaanta shirkadda iyo xarfaha iyo dhammaan macluumaadka waa in lagu daraa.
aad u leedahay si aad u soo dejiso Halkan.
Ma doonaysaa in aad nala wadaagto jeesjeeska shaambada? Hore u soco, waxaad kaga tagi kartaa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » shaambad jeesjees
Sida loo sameeyo shaxda ururka ee Power Point